Umatshini Wokugaya Umatshini Wokugaya Umgquba we-Organic
Organic isichumisi pulverizer ekwabizwa ngokuba isando isityumzi, lisetyenziswa bio-organic ukuchumisa composting, kamasipala inkunkuma eqinileyo inkunkuma, ingca peat carbon, inkunkuma zasemaphandleni inkunkuma, mveliso organic inkunkuma, imfuyo kunye neenkuku umgquba, kunye nezinye izixhobo ezizodwa inkqubo yokutyunyuzwa inkqubo zebhayoloji ukubila kunye nezinto eziphezulu zokufuma.
isando samanzi sokugaya sisetyenziselwa izinto zenkunkuma, ezinje ngomgquba wenkuku, ubulongwe beenkomo, inkunkuma yegadi, njl.njl. Kuyinto isicelo ebanzi, ingakumbi izinto ukufuma eliphezulu, kananjalo ke uhlobo umatshini isityumzi emanzi.
I-organic organic pulverizer pulverizer isetyenziswa kakhulu kwi-bio-organic fermentation composting, umquba oqinileyo wenkunkuma kamasipala, ingca ye-peat carbon, inkunkuma yasemaphandleni, inkunkuma yezemizi-mveliso, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu, kunye nezinye izixhobo ezikhethekileyo zenkqubo yokutyumza ukuvumba kwebhayoloji kunye nokufuma okuphezulu izixhobo. Izixhobo zinokufuma okuvumelekileyo amaxabiso angama-25% -55% kwimveliso yezichumiso zebhayoloji, kwaye ubungakanani beengceba zokutyhoboza bufikelela kwiimfuno zegranulation. Lo matshini usombulula ingxaki yokutyunyuzwa komxholo wamanzi aphakamileyo wezichumiso, kwaye unefuthe elifanelekileyo lokuchotshozwa kwezixhobo zezichumiso zezinto eziphilayo. Lo matshini ukwakulungele ukutyunyuzwa kakuhle kwimigodi, amalahle, isinyithi kunye namanye amashishini.
Ipulverizer yemisebenzi emininzi yenziwe ngamalungu amathathu: umzimba, umzimba ophakathi kunye nomzimba osezantsi. Umzimba ophakathi ufakwe umsesane we-stator kathathu, umsiki otyumkileyo kunye nesicazululi esihle. Umatshini ophambili wamkela intloko yokusika i-alloy. Inesidanga esiphezulu sokuxhathisa ukunxiba, ekwaphucula imveliso. Ngokutyunyuzwa okurhabaxa, ukutyunyuzwa okucolekileyo, kunye nokutyunyuzwa kwe-centrifugal, i-motor iqhuba i-rotor ye-crusher ukuba ibaleke ngesantya esiphezulu, ukuze umatshini avelise ukuhamba ngesantya esiphezulu somoya ukuze kuveliswe amandla amakhulu okunyanzela, amandla oxinzelelo, kunye nokusika amandla izinto ezityumkileyo, kwaye ifezekise imisebenzi ekhethekileyo yokutyunyuzwa. Isityumzi mininzi yinto entsha yokutyunyuzwa kwezixhobo zoomatshini. Iinxalenye isityumzi ikakhulu ziqulathe istili, ukuthwala, ikhusi, ivili ukudluliselwa, kunye nesakhelo umkhombe.
Chwetheza 400 600 800
amandla 18.5KW 22KW 30KW
umthamo 1-2t / h 3-4t / h 5-6t / h
ubungakanani 1.17x1.25x1m I-1.46x1.35x1.32m 1.56x1.62x1.5m
Ubungakanani bokugqibela Ngaphantsi kwe 1mm
INDAWO YOKUSEBENZELA NEENKONZO